Naya Pusta २०७५ माघ ५ राजनीति
काठमाडौँ । आफ्नो मोबाइलको पासवर्ड निदिँदा श्रीमतीले श्रीमानलाई जिउँदै जलाएकी छिन्। यो घटना इन्डोनेसियाको हो। पश्चिम नुसा टेङ्गोरा प्रदेशको पूर्वी लम्बोर्क रिजेन्सीमा २६ वर्षीय डेडी पुरनामा घरको छत मर्मत गरिरहेका थिए। त्यही बेला उनकी श्रीमती इल्हाम चहयानीले उनको मोबाइलको पासवर्ड मागिन् । डेडीले पासवर्ड दिएनन्। त्यसपछि उनीहरु झगडा गर्न थाले। झगडाकै क्रममा डेडीले
ओली सरकारले सर्वसत्तावादी शासन लाद्न खोज्यो : सभापति देउवा
Naya Pusta २०७५ माघ ४ January 19, 2019 Special News, प्रदेश नम्बर ४, राजनीति
कुमार बाबू हितँगा स्याङ्जा । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार एक कार्यक्रममा बोल्दै बर्तमान ओली सरकारले प्रजातन्त्रको मुल्य मान्यतालाई कटौती गर्दै सर्वसत्ताबादी शासन लाद्ने दुश्प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभएको छ। शुक्रबार स्याङ्जामा जातन्त्र शेनानी स्व. शिवकुमार अधिकारीको श्रद्धान्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले बाम सरकारको बिरुद्धमा संघर्षमा जानु पर्ने अवस्था सृजना भएको
डा. केसीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगे काँग्रेस नेता थापा
Naya Pusta २०७५ माघ ४ राजनीति, स्वास्थ्य
काठमाडौँ – डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न कांग्रेस नेता गगन थापा टिचिङ अस्पताल पुगेका छन् । शिक्षण अस्पतालमा उपचारारत डा. केसीलाई भेट्न पुगेका थापाले केसीको स्वास्थ अवस्थाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि ९ दिनदेखि इलाममा अनसनरत डा.केसीलाई बिहीबार सेनाको नाइटभिजन हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो । बिहिबार राति १० बजेर ३
काँग्रेस स्याङ्जाको कार्यबहाक सभापतिमा राना
Naya Pusta २०७५ माघ ४ राजनीति
स्याङ्जा । नेपाली काँग्रेस स्याङजाको कार्यबहाक सभापतिको जिम्मेवारी कुमार रानालाई दिईएको छ । बिहिबार बसेको काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले कार्यबहाक सभापतिको जिम्मेवारी रानालाई दिने निर्णय गरेको काँग्रेस स्याङ्जाका प्रवक्ता इन्द्र गोदारले जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेसको विधान–२०७५ को धारा ४९ को उपधारा १० बमोजिम रानालाई कार्यवहाक सभापतिको जिम्मेवारी दिईएको हो । राना
Naya Pusta २०७५ माघ ३ Man News, राजनीति
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–१०बुद्धचोकमा मापदण्ड विपरीत भवन बनेको छ । जसमा होटेल टास्क इन्टरनेसनल खुलेको छ । साढे तीनतले भवन निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिकाबाट अनुमति लिए पनि घरधनी मीन गुरुङले १० तले घर बनाएको भन्दै महानगरले होटलको विरोध जनाएको छ । तर सो होटलेको उद्घाटन भने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गरेका छन्
Naya Pusta २०७५ माघ ३ राजनीति
काठमाडौँ, ३ माघ । नेपाली काङ्ग्रेसले आजदेखि पदावधि समाप्त भएको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत मङ्सिर २ गतेको बैठकको निर्णयबाट नेविसङ्घ केन्द्रीय समितिको थप गरिएको दुई महीनाको पदावधि आज माघ २ गतेसम्म कायम थियो। काङ्ग्रेसले सङ्घ केन्द्रीय
जब ८.७ रेक्टरको भूकम्पले हल्लिएको थियो
Naya Pusta २०७५ माघ २ Man News, Special News, राजनीति
काठमाडौं । १५ जनवरी १९३४ अथवा विस १९९० माघ २ गतेको को त्यो कालो दिन । नेपाल र भारत ८ दशमलव ७ रेक्टर स्केलको भूकम्पले यसरी हल्लियोकी पृथ्वी नै कोल्टे फरेजस्तो भयो । भारतको बिहारदेखि नेपालको काठमाडौंसम्म जमिन यसरी फाट्यो ठूल्ठूला भवनहरु पनि पृथ्वीको गर्भमा भासिए । हेर्दा हेर्दै केही क्षणमै